माइत गएकी श्रीमती फर्काइदिन माग गर्दै रुखमा चढेर ८ घण्टा धर्ना ! - Everest Dainik - News from Nepal
माइत गएकी श्रीमती फर्काइदिन माग गर्दै रुखमा चढेर ८ घण्टा धर्ना !
२०७७, ११ पुष शनिबार
कर्नाटक : भारतको कर्नाटकास्थित एक गाउँमा अचम्मको घटना भएको छ । पत्नीलाई घर फर्काउन र पारिवारिक पुनर्मिलन गराउन माग गर्दै ४० वर्षीय ती व्यक्ति नरिवलको रुखमा चढेर ८ घण्टासम्म टुप्पोमा बसेर धर्ना दिएका छन् ।
दसोबनाहल्ली गोल्लाराहात्ती नामक उक्त गाउँमा भएको सो घटनाका कारण गाउँलेसमेत अचम्ममा परेका छन् । परिवारमा भैरहने झगडाका कारण ती पुरुषकी श्रीमती पाँच वर्षअगाडि घर छाडेर हिँडेकी थिइन् ।
डोडाप्पा नामका ती व्यक्ति माइती गएर बसेकी श्रीमतीलाई घर फर्काइदिन माग गर्दै गत मंगलबार दिउसो ३ बजेतिर नरिवलको रुखमा चढेका थिए ।
गाउँलेहरूले आफ्नो घरेलु झगडा मिलाइदिन नसकेको र पत्नीलाई फर्काइदिन नसकेको भन्दै उनले गाउँलेहरूलाई सराप्दै रुखमा बसिरहे र तल र्झन भन्दा मानेनन् ।
पत्नी नहुँदा पछिल्ला वर्षहरूमा आफूलाई परिवार तथा ३ वटा छोराको हेरचाह गर्न अप्ठेरो परिरहेको उनको जिकिर छ ।
डोडप्पा रुखमा चढेर तल नझर्ने ढिपी कसेपछि गाउँले र उनका छोरा ८ घण्टासम्म तल कुरेर बसिरहे । उनीहरूले डोडप्पलाई तल र्झन अनुरोध गर्दै मनाउने प्रयास गरिरहे ।
तर, डोडप्पाले भने श्रीमती नफर्किउन्जेल आफु रुखबाट नओर्लिन ढिपी कसिरहे ।
त्यसपछि गाउँलेहरुले प्रहरीलाई खबर गरे । खबर पाउनासाथ प्रहरी घटनास्थल पुग्यो । श्रीमतीलाई माइतीबाट फर्काइदिने आश्वासन प्रहरीले दियो । रातको ११ बजे जब प्रहरीले माइतीमा बसेकी उनकी पत्नीलाई त्यहाँ ल्याउन सफल भयो । अनि मात्र डोडप्पा रुखबाट तल ओर्लिए ।